बीमा ब्यवसायमा जनसम्पर्क – Insurance Khabar
बीमा ब्यवसायमा जनसम्पर्क
प्रकाशित मिति : १५ असार २०७७, सोमबार १३:५९
मानव जिवन चारैतर्फबाट जोखिमले घेरिएको छ, उसको जिवनमा कहा र कहिले कस्तो प्रकारको बिपत्तीसंग सामना गर्नु पर्छ त्यो कसैलाई थाहा छैन । अति सुखी तथा खुशी परिवार प्रमुख व्यक्तिको मृत्यु पश्चात दुःखको सागरमा डुव्न पुग्दछ । ठुला ठुला भवन तथा कलकारखाना निमेष भरमै खरानी पारीदिन्छ ।
बाढी, पहिरो, अतिबृष्टी, अनाबृष्टी, भुकम्प, सुनामी तथा आंतकबादी गतिबिधीका कारण मानव जातिले मानविय तथा भौतिक क्षति बहन गरिरहनु परेको छ । यस्ता बिपत्तीहरु कहिले, कसरी र को माथी आईपर्छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा हुदैन यद्यपी उ जतिसुकै चलाख किन नहोस र बिज्ञानले पनि यसको समाधान गर्न सकेको छैन । उदाहरणनै लिनेहो भने, अति सक्षम दमकल व्यबस्थापनको कारण शहरमा आगलागीनै रोक्न सकिदैन तर आगलागी पश्चातको क्षतिमा कमी ल्याउन मात्र सकिन्छ । यसरी मानविय जिवनमा पर्न आउने जोखिमको कारण उसले आर्थिक हानी नोक्सानी व्योर्हनु पर्दछ । मानविय जिवनमा व्याप्त यिनै जोखिम, अनिश्चितता र आर्थिक हानी नोक्सानीका कारण बीमाको उत्पत्ती भएको मानिन्छ । सामान्यतया बीमाले अनिश्चितताका काराण उत्पन्न आर्थिक हानी नोक्सानीको पूर्ति गर्ने कार्य गर्दछ ।
अतः बीमा जोखिम र आर्थिक क्षति संबन्धि अनिश्चितता बिरुद्ध आएको सिद्धान्त हो, जहा न्यूनतम मापदण्ड पुरागर्नु पर्ने हुन्छ । अर्थात मानविय जिवनमा आईपर्न सक्ने जोखिम, अनिश्चितता तथा क्षतिको सम्भावनालाई व्यबस्थित गर्ने उपायनै बीमा हो । तथापी बीमालाई कार्य संबन्धि धारण (बीमाले जोखिमको लागतलाई त्यस समुहमा बाँड्ढछ जसले गर्दा जोखिमबाट नोकसानीमा परेकाकेही ब्यक्तीहरुलाई भुक्तानी गर्न सकिन्छ) र करार संबन्धि धारण (बीमा दुई पक्षहरुको बिच गरिएको एक करार हो, जसमा एक पक्षले निश्चित बीमा शुल्कको बदलामा अर्को पक्षको विशिष्ट जोखिमलाई ग्रहण गर्दछ र भबिष्यमा कुनै उल्लेखित घटना घटेमा उसलाई एक निश्चित रकम दिने वा क्षतिपूर्ती गर्ने वचन दिएको हुन्छ) बाट बिभिन्न बिद्धानहरुले परिभाषित गरेको पाईन्छ ।
मानिस एक सामाजिक प्राणि हो, उ एक्लै बस्न सक्दैन र स्वाभावलेनै एक अर्कोको स्वभाव, आनी बानी र धारणा जान्न चाहान्छ । यो प्रकृया मानव सभ्यताको शुरुवात देखिनै भएको मानिन्छ, जस अनुसार उ कसैको नजिक वा टाढा हुन सक्दछ । प्राचिन कालमा राजाहरुले जनताको धारणा बुझ्न आफै भेष बदलेर हिडेको र बर्तमान समयमा बिभिन्न गुप्तचर संयन्त्रको प्रयोग भएको हामी देख्न र सुन्न पाउछौ ।
समाजमा रहेको बिभिन्न प्रकारका ब्यक्ती, समाजिक संध संस्था तथा ब्यबसायिक घरानाहरु संग स्थापित गरिने सुमधुर संबन्धलाई जनसम्पर्क भनिन्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने, आफ्नो समुह र दोश्रो समुह बिच सुसम्बन्ध वा समझदारी कायम गर्ने कला वा विज्ञान नै जन सम्पर्क हो ।
ब्याबसायिक संस्था भित्र र बाहिरका विभिन्न ब्यक्तीहरु बिच समधुर संबन्ध राख्न गरिने दोहोरो संचार लाई जन सम्पर्क (Public Relation) को रुपमा बुझिन्छ ।
जन सम्पर्क एक प्रकारको संचार हतियार हो जसले सांगठानिक प्रतिष्ठासंग सरोकार राख्दै, संस्थाको निती, उद्धधेश्य र कार्यक्रमहरु लक्षित बर्ग लाई जानकारी गराई उनीहरुलाई आफु प्रती आकर्षण गर्ने काम गर्दछ । जन सम्पर्कले उपभोक्ता तथा ग्राहकको धारणामा बिकास तथा परिवर्तन ल्याई उत्पादक संस्थाको प्रतिष्ठा बढाउदछ । जन सम्पर्कका अभ्यासकर्ताहरु आफ्ना ग्राहकहरुको रुची तथा धारणाको परिक्षण गर्दै आफ्ना बस्तु तथा सेवा तिनीहरु सम्म पुर्याउने कार्यक्रम निर्माण गर्दछन । फलस्वरुप ब्यबसायमा अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन्छ । ब्यक्ति बिषेश, प्रेस नोट, ब्रोसर, प्रत्र प्रत्रिका, अडियो/भिडियो, बिज्ञापन तथा वेभसाईट आदी जनसम्पर्कका माध्यमहरु हुन ।
“जनसम्पर्क भन्नाले कुनै संघसंस्था वा निकायले आफु स्वयं भित्र र आफ्नो बिषेश ग्राहक वा लक्षित सर्वसाधारण बिच दोहोरो संचारको प्रकृयाद्धारा सद्भभावना र समझदारी सृजना गर्नु वा त्यसका लागी उचित बातावरण तयार गर्नु भन्ने बुझिन्छ ।“ —————————————– संचारकर्मी लाल देउसा राई ।
जनसम्पर्कका आधारभुत तत्वहरूः
संचारको रुपमा जन सम्पर्क
सामाजिक चिन्तनको रुपमा जन सम्पर्क
निति कार्यान्वयन त परिणामको रुपमा जन सम्पर्क
ब्यबस्थापन दर्शनको रुपमा जन सम्पर्क
जनसम्पर्क एक प्रकारको कला हो, जसले बस्तु उत्पादक र उपभोक्ता बिच गहिरो सहानुभिती र संबन्ध स्थापित गर्छ । मानिसमा बस्तु तथा सेवाका बारेमा रहेको नकारात्मक सोचाईलाई सकारात्क बनाई बस्तु तथा सेवा उपयोग गर्नका लागी अग्रसर गराउदछ । सामान्यतया जनसम्पर्कका कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन ।
बस्तु तथा सेवाका संबन्धमा मानिसमा पर्न गएको गलत धारणा हटाउनु ।
आपसी असमझदार त्यागी समझदारी र मित्रतापूर्ण भावनाको बिकास गरी दिर्धकालिन संबन।ध स्थापना गर्छ ।
ब्यक्ती तथा लक्षित समुहलाई सहि दिशातर्फ उन्मुख गरी आफ्नो पक्षमा ल्याउन आकर्षण गर्छ ।
ब्यवसायिक वा उत्पादकले आफ्नो उत्पादनमा भएको कमि कमजोरी पत्ता लगाउने तथा तिनीहरुबाट सुझाब लिई आबश्यक सुधार गर्न सक्दछ ।
मानिसमा चाख जगाउने, दच्चिएकालाई पून आफ्नो बनाउने, ज्ञान नभएकालाई ज्ञानी बनाउने, नकारात्मक स्थितिलाई सकारात्मक बनाउने कार्य पनी जनसम्पर्क भित्र पर्छ ।
जनसम्पर्कको मुख्य उद्धेश्य संगठन र जनसाधारण बिच समधुर संबन्ध कायम गर्नु नै हो । संगठन भित्र र बाहिर सबैसंग आत्मियता बढाउदै बस्तु तथा सेवाका बारेमा सकारात्मक सोच जागृत गराउनुमा जनसम्पर्कको भुमिका अहंम हुन्छ । कुनै पनी संस्थाले आफ्नो उत्पादन तथा सेवाका बारेमा प्रचार प्रसारका बिभिन्न माध्यमहरु (बिज्ञापन, प्रदर्शनी, भिडियो फिल्म) बाट सर्वसाधारणमा जानकारी दिन सक्छ । संगठन र जनता बिच अत्याधिक मात्रामा संचार हुने बातावरण पनी जनसम्पर्कको बिकासबाटै भएको हो, तर जनसम्पर्कको प्रकृयाले त्यो बेला मात्र प्रभावकारीता प्राप्त गर्छ जुन बेला प्रभावकारी संचार माध्यमको प्रयोग भएको हुन्छ ।
जनसम्पर्कको भुमिका निम्न बमिजिम रहेको छः
बस्तु तथा सेवा प्रतीको बिद्यमान सोच लाई सकारात्मक सोचमा परिवर्तन गर्छ ।
बस्तु तथा सेवा प्रती ब्यक्तिगत सहानुभूति जागृत गराउदछ ।
मानिसहरुबाट जनबिश्वास प्राप्त गरी आत्मियता बढाउदै समुहमा चित परिचित हुने बातावरण सृजना गर्छ ।
बस्तु तथा सेवाको बिक्री हुने बातावरण सृजना गर्छ ।
संगठन वा बस्तु तथा सेवा प्रतीको नकारात्मक धारणा लाई परिवर्तन गर्छ ।
नकारात्मक प्रचार – प्रसारको खण्डन गर्छ ।
उत्पादन र संस्थाको छवी उच्च गर्दै प्रतिष्ठा आर्जन गर्छ ।
संगठन र जनता बिच समधुर संबन्ध कायम गर्छ ।
बिचार, सिध्दान्त वा धारणाको प्रचार गरी आफ्नो पक्षमा जनमत सृजना गर्छ ।
जनसम्पर्कको ढाँचाहरू (Models of PR):
प्रेस एजेण्ट वा पब्लिसिटी मोडल (Press Agent of Publicity Model): एकोहोरो बिधी
पब्लिक इन्फरमेसन मोडल (Public Information Model): यो पनी एकोहोरो बिधी
दोहोरो संचार (Two Way Communication): संचार र अनुसंधान बिधीको प्रयोग गरी द्धन्द्ध ब्यबस्थापन र सबन्ध अभिबृर्दीका लागी काम गर्छ ।
बीमा ब्यबसायमा जनसम्पर्क
बीमाले के बिक्री गर्छ, कसरी बिक्री गर्छ भन्नेमा जनसम्पर्कले स्पष्ट पार्छ । बीमामा बिक्रय कला के हो र यसले कसरी काम गर्छ र जनसम्पर्क बिक्रय कलाको एक सुन्दर पक्ष हो भन्नेमा दिशा निर्दैश गर्छ ।
जनसम्पर्क कसरी गर्ने ?
बसको कुन सिटमा बस्ने ? अनौपचारिक जनसम्पर्क यसले मानिसको व्यक्तित्व तर्फ आकर्षित गर्छ ।
बिहेकोलागी केटा केटी कसरी खोज्ने ? अनौपचारिक जनसम्पर्क यसले समाजमा सुचनाको सम्प्रेषण गर्छ ।
बिज्ञापन, प्रेस बिज्ञप्ती, भिडियो फुटेज आदी बाट जनसम्पर्क हुने भए पनि बीमामा प्रत्यक्ष र दोहोरो तथा औपचारिक जनसम्पर्क बढी प्रभावकारी हुन्छ ।
बीमा (जिवन तथा निर्जिवन) मा औपचारिक र अनौपचारिक दुवै प्रकारका जनसम्पर्क बिधी अबस्था हेरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ । मुख्य रुपमा तलका केही तरिकाहरुलाई प्रयोग गरेर अगाडी बढ्दा अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुनेछ ।
बिहे, मलामी, जन्ती तथा सामाजिक कार्यमा भेटधाट बढाउनुहोस
सामाजिक संजालमा बधाई, शुभकामना, समबेदना तथा श्रर्दान्ञ्जली दिदै आफ्नो उपस्थिती बनाउनुहोस
पिकनिक, भोज तथा सामुहिक उपस्थिती हुने स्थानमा सबैलाई ध्यान दिदै अभिबादन गर्नुहोस
अन्य भन्दा पृथक बन्नुहोस — बस्तु तथा सेवाको बारेमा स्पष्ट ज्ञान राख्नुहोस
बस, सभा हल तथा खानाको लाईनमा हुनुहुन्छ भने आदरणियलाई सिट वा पालो छोड्नुहोस
फकाउन सके जे पनी पाईन्छ भन्ने कुरा कहिल्यै नभुल्नु ।
सिष्टताको प्रयोगमा पछाडी नपर्नुहोस,
तुलना होईन क्षमता बिकास गर्नुहोस,
सुचना सयन्त्र भित्रै बस्नुहोस ।
-पराजुली विभिन्न परियोजनाहरुमा बीमा परामर्शदाताको रुपमा कार्यरत छन् ।